Abaalmarinta Caddaaladda - Falal Argagix - Dilkii Qunsuliyadda
Karachi, Pakistan | Maarso 8, 1995
Subaxa 8-da Maarso, 1995-kii, gaari cad oo siday rakaab ku socday shaqada qunsuliyadda Mareykanka ee Karachi, Pakistan. Waddooyin isdhaafa oo aad u mashquul ah, waxaa gaariga isbaaro u dhigtay tagsi huruud ah, isagoo ku qasbay in uu istaago iyadoo uu gaari kalena ishortaagay si aannu u dhaqaaqin. Argagixiso wajiyada soo dabooshay oo sitay qoryaha darandooriga u dhaca ayaa yimid kaddibna rasaas ku furay, rasaas ayeey oodda uga qaadeen waxayna burburiyeen daaqadaha. Laba ka tirsan shaqaalaha qunsuliyadda Mareykanka ayaa la dilay mid kalena weerarka ayuu ku dhaawacmay.
Jaajuus, ka dib markay arkeen buugii RFJ, waxay soo sheegeen macluumaad sheegaya halka uu ku sugnaa Ramzi Yousef, oo ah qofkii ka dambeeyey bamkii 1993 ka dhacey Xarunta Ganacsiga Caalamka (World Trade Center).